Toriteny 02 febroary 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny 02 febroary 2014
Jeremia 33: 1-9 / Matio 8:5-13 / II Timonty 3:14-17
“… Antsoy Aho dia hovaliako ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy sarop-pantarina izay tsy fantatrao …” Jeremia 33:3
Teny efa fampiasantsika mandrakariva io andalan-tsoratra Masina io, fa hatraiza kosa no fampiharantsika azy eo amin’ny fiainana, ary inona no zava miafina raketin’izany Tenin’Andriamanitra izany ?
Hafatra 1°: Mamonjy antsika Andriamanitra na dia ao anatin’ny famaizana aza
Nanao izay ratsy indrindra teo imason’Andriamanitra ny Zanak’ Israely ka nofaizin’Andriamanitra ary dia navelany ho viravirain’ny Jentilisa mihitsy ny fiainany. Eo anatrehan’izany anefa no anambaran’Andriamanitra fa TIA foana Izy ary mamonjy ao anaty fahasarotana.
Miantefa amiko sy aminao izany, misy fotoana isika latsaka ao anaty fahoriana lalina, noho fahadisoana natao, na koa hetraketraky ny hafa, tsarovy fa misy lalana tsy takatry ny saina hitondran’Andriamanitra ny fiainantsika mba ho fanitsiana sy ho fitaizana ary fananarana. Amin’io ady sarotra io indrindra no itenen’Andriamanitra aminao fa tia anao Izy. Ireny no endrika famaizana izay mtondra ahy sy ianao ho amin’ny lalan’ny famonjena .
Hafatra 2°: Manasitrana antsika Andrimanitra na dia ao anatin’ny famaizana aza
Rehefa tena latsaka ao anaty fahoriana ny olona dia tsy mahatsiaro akory izay antenainy hamonjy sy hanafaka azy. Nefa raha vao avelan’Andriamanitra miseho amin’ny fianantsika ireny dia tsarovy fa efa vonona koa Izy amin’ny fanasitranana.
Diovina sy sitranina amin’ny alalan’ny ran’I Jesoa Kristy isika mba hanana fifandraisana amin’Andriamanitra. Ka na toy inona na toy inona vesatry ny fahotana vitantsika na ny fihodinantsika dia manome toky Izy Andriamanitra fa vonona hanasitrana sy hamela heloka. Cf Matio 8:5-13 “Ho avy aho hanasitrana Azy”. Rehefa tonga ny famaizana dia tsy maintsy misy koa ny fanasitranana.
Raha tojo zava-tsarotra ny fiainatsika, manome toky Andriamanitra fa ao anatin’io no misy ny zava-miafin’ny famonjena ahy sy ianao. Aoka tsy ho kivy na tofoka amin’izay fananarana ataon’Andriamanitra. Ny anjarantsika dia ny miantoraka Aminy foana, fa Izy Andriamanitra no mikapoka ary Izy ihany koa no hanasitrana ny fery. Fa hoy ny Teniny “Antsoy Aho dia hovaliako ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao…”
ANDRIANARISOA Hjanaiaina Célestin, Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 5 février 2014